Njengoba kunamabhishi angama-365 anamanzi ahlanzekile aluhlaza okotshani, iziqhingi eziluhlaza ezishisayo zase-Antigua naseBarbuda ziyipharadesi elikhangayo futhi elibhekwa njengezindawo ezinhle kakhulu emhlabeni. Ngenxa yalokhu, ezokuvakasha zingumshayeli ophambili we-GDP futhi zikhiqiza cishe i-60% yemali engenayo yesiqhingi, izimakethe ezibhekiswe kuzo yi-US, Canada ne-Europe.
Imali iyidola laseMpumalanga yeCaribbean (EC $), ekhonjwe kwi-US $ ngo-2.70 EC $ / US $. U-Antigua noBarbuda bayilungu le-United Nations (UN), iBritish Commonwealth, iCarcom kanye ne-Organisation of American States (OAS), phakathi kwezinye izinhlangano eziningi zomhlaba. Abaphethe ipasipoti yase-Antigua neBarbudan bajabulela ukuhamba mahhala kwama-visa emazweni angaphezu kwe-150, kufaka phakathi i-United Kingdom kanye namazwe asendaweni yaseSchengen. Abaphethe le phasipoti, njengawo wonke amazwe aseCaribbean, badinga i-visa yokungena e-US njengoba bengelona ilungu lohlelo lwe-Visa Waiver Programme.